Ping iPhone lumay isticmaalaya Control Center on Apple Watch [Pro tip] | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Ping iPhone lumay adoo isticmaalaya Xarunta Xakamaynta ee Apple Watch [Pro tip]
Ping iPhone lumay adoo isticmaalaya Xarunta Xakamaynta ee Apple Watch [Pro tip]
Ma xasuusan kartaa meesha aad kaga tagtay iPhone-kaaga? Isticmaal Xarunta Xakamaynta ee Apple Watch si aad u "ping" u sameyso si aad si dhakhso ah ula socoto. Waxaad xitaa heli kartaa iPhone-kaaga iftiin si ay u sahlanaato in mugdiga laga helo.
Apple waxa ay fududaysay in la daba galo aaladaha lumay iyada oo la isticmaalayo Find My app. Laakiin ka waran haddii aad ogtahay in iPhone-kaagu uu guriga joogo - ma ogid halkee? Isticmaalka astaanta ping-ka ee Apple Watch, waxaad ku heli doontaa waqti la'aan.
Pining kaaga iPhone-ka waxay keentaa sanqadh weyn oo dhawaaqa si qalabkaagu u fududaado in la ogaado, xitaa haddii uu ku dhacay gudaha sariirta. Oo markay mugdi tahay, waxaad sidoo kale shid kartaa iftiinka LED-ka ee iPhone-kaaga.
Ku dheji iPhone kaaga Xarunta Xakamaynta ee Apple Watch
Si aad uga bilawdo inaad iPhone ka soo dhejiso Apple Watch, raac talaabooyinkan:
Open Control Center on Apple Watch adiga oo kor uga soo qaadaya dhanka hoose ee shaashadda marka aad joogto wajiga saacada.
Taabo badhanka ping si aad iPhone-kaaga uga dhigto cod. Taabo oo hay badhanka ping si aad sidoo kale u iftiimiso iPhone kaaga.
IPhone kaaga wuxuu sii wadi doonaa inuu garaaco inta aad raadinayso. Waxay joogsan doontaa markaad hesho qalabkaaga oo aad furto. Nasiib darrose, Apple Watch waxa ay ku dhejin kartaa oo keliya iPhone-ka ay ku lammaansan tahay, marka isla sifada iPad-ka kama shaqayn doonto.
Aaladaha Mobile Fudud ee Asal ahaan dalka iyo abuuraha
Dib u habayn Xarunta Kontoroolka si aad agabka aad jeceshahay uga dhigto mid sahlan in la helo [Pro tip]